Wasiir Juxa oo baaq deg-deg ah u diray beesha caalamka iyo hay’adaha Samofalka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Juxa oo baaq deg-deg ah u diray beesha caalamka iyo hay’adaha Samofalka
Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Juxa ayaa baaq deg-deg ah u diray beesha caalamka iyo sidoo kale hay’adaha samofalka ah, taasi oo ku wajahan gurmadka abaaraha.
Waxa uu sheegay wasiirka in dalka ay ka jirto xaalad adag, islamarkaana laga doonayo caawinaad aan kala joogsi lahayn iyo ka jawaabis deg-deg ah.
“Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka, hay’adaha kale ee deeqaha bixiya, shacabka Soomaaliyeed inay deg-deg uga dhabeeyaan gurmadkooda oo shacabka Soomaaliyeed lala soo gaaro wax ay cunaan, cabaan iyo caafimaad intaba” Sidaas waxaa yiri wasiir Juxa.
Dhinaca kale, wasiir Juxa ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ay wado dedaal xooggan oo ku aadan sidii ay wax uga qaban laheyd abaarta ka jirta dalka, ayna codsi u dirsanayaan cid walbo oo ay wax ku tuhmayaan.
Si kastaba, dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka jirta abaar baahsan oo saameysay dadka iyo duunyada, waxayna dadku u baahan yihiin in loo gurmado.